छोरीको हत्या गरेर सुटुक्क जलाउने आमा-बाबु !! कस्तो निर्दहि बाबु आमा ? - Enepalese.com
छोरीको हत्या गरेर सुटुक्क जलाउने आमा-बाबु !! कस्तो निर्दहि बाबु आमा ?
इनेप्लिज २०७४ चैत १६ गते ११:०२ मा प्रकाशित
छोरीको हत्या गरेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले आमा–बाबुलाई पक्राउ गरेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका १५ भिस्वामा आफ्नै छोरीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय ४१ वर्षीय सत्यनारायण वर्णवाल र उन की कान्छी पत्नी ३० वर्षीया गीता कुमारीलाई पक्राउ गरेको हो।